काभ्रेको खानीखोलामा माओवादी केन्द्रका थिङ र कांग्रेसका जिम्वा विजयी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ४, २०७९ नगेन्द्र अधिकारी
काभ्रे — खानीखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनकाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर थिङ (छिन्ताङ) र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका दोर्जेमान जिम्वा निर्वाचित भएका छन् ।
अध्यक्षमा निर्वाचित थिङले ४ हजार ४ सय ८५ मत पाए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका शेखर लामाले ३ हजार १ सय ५६ मत पाएका थिए । उपाध्यक्षमा जिम्वाले ४ हजार ३ सय २८ मत पाए भने एमालेकी रुकमणि गुरुङले २ हजार ९ सय ८७ मत प्राप्त गरिन् ।
७ वडा रहेको खानीखोलामा माओवादी केन्द्रले ४, कांग्रेसले २ र एमालेले एक वडामा जित हासिल गरेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ १२:०८
सिन्धुलीको फिक्कलमा एमाले विजयी
सिन्धुली — सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेकी पार्वती सुनुवार विजयी भएकी छन् । गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका नृप भुजेललाई ४५ मतले पराजित गर्दै सनुवार निर्वाचित भएकी हुन् ।
एमालेकी सुनुवारले ४ हजार ६२ मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका भुजेलले ४ हजार १७ मत पाए । सुनुवार सिन्धुलीमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला उम्मेदवारसमेत बनेकी छन् ।
उपाध्यक्षमा भने एमालेकै राजु बरालले फराकिलो अन्तरमा विजयी भएका छन् । बरालले ४ हजार २ सय ५६ मत पाई निर्वाचित हुँदा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका लोकेन्द्र कार्कीले ३ हजार ४ सय २६ मत प्राप्त गरे । ६ वडा रहेको फिक्कलमा वडा नं. १ माओवादी केन्द्र र वडा नं. ४ मा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए भने बाँकी सबै वडा एमालेले जितेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ १२:०२